Mines minister: Zim looks to alleviate foreign currency shortages – Peoples Daily
Mines minister: Zim looks to alleviate foreign currency shortages
February 5, 2019 News Room	0 Comments
CAPE TOWN – Zimbabwe’s mines minister on Monday said the central bank governor would soon introduce a monetary policy tool to alleviate foreign currency shortages that have affected mining companies.
Zimbabwe is hoping its mining sector could help drive a moribund economy buffeted by high inflation and unemployment, as new President Emmerson Mnangagwa looks to woo investors following a soft coup in November 2017 which usurped former president Robert Mugabe.
But a shortage of cash has hurt industries, with Zimbabwe’s gold miner RioZim last year closing its three mines due to a shortage of dollars, the company said in a letter to the central bank.
Last month, Russian diamond miner Alrosa and China’s Anjin Investments were selected by Zimbabwe’s government to partner with the state diamond company.
“At the end of the day it is an issue of balancing the needs of investors with the needs of the country… The issue of policy clarity and policy consistency is absolutely top,” Chitando said. – Reuters
← Highlanders retain Ngwenya, Ndebele
Teachers to strike, ignoring government appeal →
Central bank scraps official parity for fuel imports
May 21, 2019 News Room 0
Platinum miners plan base metal refinery, Minister says